အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ပညာပေးခြင်း | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် အသက်အရွယ်အလိုက် လိင်ပညာပေးခြင်း
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ ရိုင်းမယ်၊ ကလေးတွေကို လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်း သင်တော့မယ်လို့ တွေးထင်မိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ လိင်ပညာပေးခြင်းဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်း ကို ရည်ညွန်းတာမဟုတ်ဘဲ ကလေးအရွယ်ကတည်းက မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင် သွန်သင်ထားခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို အရှက်နဲ့ ကာထားသလို ဖြစ်နေပြီး မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ထားရမှာတွေကို မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒါဆိုရင် အရှက်ကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ကလေးတွေကို ဘယ်လိုလိင်ပညာပေးရမလဲ? ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ? ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဘာတွေသင်ထားပေးရမလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက်တော့ မပူပါနဲ့၊ သိလိုရာမေးက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေကို ညွန်ပေးသွားပါမယ်။
၂နှစ်အရွယ်အထိ – သိတတ်စမှ ၂နှစ်အရွယ်အထိကလေးတွေကို ယောကျာၤးလေးနဲ့ မိန်းကလေး မတူဘူးဆိုတဲ့ အရာတွေကို ခွဲခြားရှင်းပြပေးထားပါ။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း တွေကို နားလည်လွယ်အောင် သင်ထားပါ။ (ဥပမာ- ရှက်ရှက်၊ ဂျိုးဂျိုး စသဖြင့်)ပြီးတော့ သူများလာကိုင်ရင် အကိုင်မခံဖို့ သင်ထားပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။
၂နှစ်မှ၅နှစ်အရွယ်အထိ – ဒီအရွယ်မှာတော့ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ဘယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ မတူတာလဲ ခွဲခြားပြလို့ ရပါပြီ။ အဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေက သူများကို မပြဖို့၊ ပေါ်အောင်မနေဖို့လည်း သင်ထားပေးရတော့မှာပါ။ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိသေးတဲ့ အရွယ်မှာ ရှူရှူးပေါက်တာကအစ တွေ့ကရာနေရာမှာ မပေါက်ရအောင် မှာထားရပါမယ်။
ဒီထက်ပိုပြောရရင် မူကြိုအရွယ်လေးတွေမှာ ကလေးဆိုတာဘယ်ကဖြစ်တယ်၊ ဗိုက်ကြီးတယ်၊ ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတတ်တဲ့အရွယ်မို့လို့ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ကလေးတွေနားလည်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိ မလိမ်မညာဘဲ ရှင်းပြဖို့ တိုက်တွန်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၆နှစ်မှ၈နှစ် – သိလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဒုတိယအရွယ်လိုမျိုးပဲ သင်ထားပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဖုန်းကိုင်တတ်တဲ့ကလေးတွေဆို ကလေးတွေ မကြည့်သင့်တဲ့ appတွေ၊စာတွေနဲ့ မကောင်းတဲ့ပုံတွေ မကြည့်ဖို့ ပြောပြထားပါ၊ လောခ့်ချလို့ရရင် ချထားပါ၊ ကြည့်လိုရတာ၊ မရတာတွေကို တစ်ခါတည်း သင်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ ရှက်ရှက်၊ ဂျိုးဂျိုး တွေကို လာကိုင်ရင် မကြိုက်ဘူး၊ မကိုင်နဲ့လို့ ပြောတတ်ဖို့ လိုသလို လိင်စိတ်အကြောင်းတွေကိုလည်း အနည်းငယ်ရှင်းပြထားသင့်ပါပြီ။ တချို့အပျိုဖော်ဝင်စောတဲ့ ကလေးမလေးတွေကို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းနေဖို့၊ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး၊ ဖိုမဆက်ဆံရေး၊ လိင်တူလိင်ကွဲ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်တဲ့အကြောင်းတွေပါ ပြောပြထားရင် အကောင်းဆုံးပါ။
၉နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိ – လူပျိုအပျိုဖော်ဝင်ဖို့ အစပြုတဲ့ အရွယ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲတာတွေ ဖြစ်စပြုလာပါပြီ။ ယောကျ်ားလေးတွေ အိပ်နေရင်းသုက်ထွက်တာ၊ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ရာသီလာတာ စသဖြင့် ရှင်းပြပေးထားရမှာပါ။ ဒီအရွယ်က လက်တည့်စမ်းချင်တဲ့အရွယ် ဖြစ်တဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံရင် အရွယ်မတိုင်ခင် ကလေးရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း ရှင်းပြထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူပျို အပျို ဖြစ်ခါနီးမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် လက်တည့်စမ်းချင်စိတ် ဖြစ်တာ သဘာဝပါ။ ဒီသဘာဝကို ကလေးတွေကွဲကွဲပြားပြား သိနိုင်ဖို့ မိသားစုအချစ်၊ သူငယ်ချင်းအချစ်၊ စိတ်ကစားတဲ့ အချစ်အကြောင်းတွေလည်း နားချထားလို့ ရပါတယ်။ အပျံသင်ခါစအရွယ်မှာ လက်တည့်စမ်းချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ လူအများနဲ့ ကူးလူးဆက်ယှက်ချင်တဲ့ အထိ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ မမှားသင့်တာမမှားသင့်ကြောင်း၊ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါအကြောင်း၊ ယောင်္ကျားလေးနဲ့မိန်းကလေး အပြန်အလှန်လေးစားချစ်ခင်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း စတာတွေ သင်ပြ၊ ပြောပြ၊ ပျိုးထောင်ပေးဖို့အတွက် မိဘတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
၁၂နှစ်နှင့်အထက် – အပေါ်က အချက်တွေကို သင်ကြားပေးပြီးပြီဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ တပါးသူတွေကို လေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုတာတွေ သိကိုသိထားရမယ့် အရွယ်ပါ။ ဒါ့အပြင် မျိုးဆက်ပွာကျန်းမာရေးတွေဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒုံးသုံးနည်း၊ ကိုယ်ဝန်တားနည်း၊ ဘေးကင်းစိတ်ချတဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်း စတာတွေကို သင်ပြထားရတော့မယ့် အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူပျို၊ အပျိုဖြစ်ပြီး ဂလန်ဂဆန်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ဖြစ်လို့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးရဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ချော့လိုက်၊ ချောက်လိုက်ဆုံးမနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေပါ၊ မလိမ်မညာဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါ၊ မိမိအပေါ် ကလေးယုံကြည်မှု မပျက်စေပါနဲ့။ သင့်ကလေးတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေအပေါ် ကောင်းတာဆိုးတာ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့ သူတို့နားလည်ထားတဲ့အချက်တွေကို ဘောင်မခတ်မိပါစေနဲ့ ၊ မကန့်သတ်ထားပါနဲ့။ အုပ်ထိန်းမှုထဲမှာ အမိန့်အာဏာ မပါပါဘူး။
ဒီအချက်တွေအားလုံးက မိဘနဲ့ သားသမီးတွေကြား လိင်ပညာပေးနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ယေဘူယျအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးလိုအပ်ချက်တွေကို မိဘကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးဖြစ်လို့ သင့်တော်တဲ့အရွယ်မှာ သင့်တော်သလို လိင်ပညာပေးထားနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှ အကောင်းချည်းပဲ မဟုတ်ပါလား!!!